Michael Owen Oo Saadaashiisa Ka Bixiyay Finalka Champions League Iyo Kooxda Qaadeysa
HomeWararka CiyaarahaMichael Owen oo saadaashiisa ka bixiyay finalka Champions League iyo Kooxda Qaadeysa
May 27, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada 0
Khabiirka kubada cagta Michael Owen ayaa aaminsan in kooxda Pep Guardiola ee Manchester City ay si raaxo leh uga badin doonto Chelsea finalka Champions League 2021. Wuxuu saadaaliyay inay 2-0 ku badin doonto Manchester City kulanka ka dhacaya Porto.
Weeraryahankii hore ee Liverpool ayaa aaminsan in qaab ciyaareedka adag ee City ee dhawaanahan ay ku filan tahay inay ka dhigaan kuwa ugu cadcad ka hor finalka. Isagoo ku qoraybartiisa BetVictor, Owen wuxuu yiri:
“xidigaha (Manchester City) waxay ahaayeen kuwa u qalma inay ka guuleystaan ​​labada lugood oo ay ka horyimaadeen PSG semi-finalka.
Manchester City ayaa ceyrsaneysa hanashadoodii ugu horeysay abid ee Champions League ka dib markii ay gaareen finalkoodii ugu horeysay iyagoo garaacay Paris St-Germain wadar ahaan 4-1 wadar ahaan semi-finalka.
Dhanka kale, blues ayaa ku guuleysaneysa kii seddexaad ee finalka Champions . Blues ayaa horay ugu guuleysatay koobkan, ka dib markii ay ka badisay Bayern Munich kulankii ugu dambeeyay ee 2012. Wiilasha Thomas Tuchel ayaa gaaray finalka iyagoo 3-1 ku garaacay Real Madrid semi-finalka.